Shiinaha Doosan Series Diesel Generator iyo saarayaasha |Mamo Power
1. Waxqabad xasiloon oo lagu kalsoonaan karo, qaab dhismeed isku dhafan iyo awood sare.
2. Turbocharged, qaadashada hawo qaboojisay, buuq yar, qiiqa aad u fiican.
3. Nidaamka qaboojinta piston waxaa loo qaatay si loo xaqiijiyo xakamaynta heerkulka dhululubada iyo qolka gubanaya, taas oo ka dhigaysa matoorka si habsami leh oo leh gariir yar.
4. Codsiga tignoolajiyada ugu dambeeyay ee duritaanka iyo tignoolajiyada cadaadiska hawada ayaa leh waxqabadka gubashada wanaagsan iyo isticmaalka shidaalka hooseeya.
5. Isticmaalka xadhkaha dhululubo ee la bedeli karo, giraanta kursiga waalka iyo tuubada hagaha waxay hagaajinaysaa caabbinta mishiinka.
6. Cabbir yar, miisaan fudud, awood xoog leh oo looga hortagayo culeys dheeraad ah, dhaqaale iyo mid la isku halleyn karo.
7. Supercharger-ku wuxuu isticmaalaa tamarta gaaska qiiqa si uu u wanaajiyo heerka isticmaalka tamarta, si loo kordhiyo awoodda wax soo saarka, hoos u dhigo heerka isticmaalka shidaalka, nadiifiyo qiiqa, hoos u dhigo qaylada badan ee soo noqnoqda iyo sii dheereynta nolosha adeegga.
Hore: Generator Naaftada Taxanaha ISUZU
Xiga: Deutz Series Diesel Generator
Koronto dhaliyaha 100kva
100kw Naaftada Genset oo leh Matoor caan ah
100kw Naaftada Set
Dhaliyaha Naaftada Aamusan ee La Qaadan Karo
Koronto dhaliyaha 250kva